के तपाई दिनहु मन्दिर जानुहुन्छ ? यस्ता छन् दिनहु मन्दिर जानुका फाईदाहरु ….::Nepal's Digital Paper
प्राचीन मन्दिरहरू आकाशीय ऊर्जाका केन्द्रमा स्थापित छन् । यस्ता धनात्मक ऊर्जा केन्द्र भएका मन्दिरमा खाली खुट्टा जाँदा मानिसको शरीरमा एक किसिमको ऊर्जाको प्रवाह चल्न थाल्छ । उक्त व्यक्ति जब मूर्तिका अगाडि हात जोड्छ उसको शरीरमा ऊर्जा चक्र चलायमान हुनथाल्छ । जब व्यक्ति मूर्तिका अगाडि शिर निहुराउँछ तब मूर्तिबाट परावर्तित हुने आकाशीय तरंग उसको मस्तिष्कमा पर्छ र मस्तिष्कस्थित आज्ञा चक्रमा असर पार्छ । यसबाट शान्ति प्राप्त हुन्छ भने मनमा सकारात्मक विचार पैदा हुन्छ । दुःखपीडा निवारण हुन्छ अनि भविष्य पनि उज्ज्वल हुन्छ । नांगो खुट्टा भुइँमा हिँड्नाले पाइतालाको पोइन्टमा दबाब पर्छ र ब्लड प्रेसर नियन्त्रित हुन्छ ।
नेपालको प्रचार गर्न पर्यटन बोर्डबाट एक करोड लिएर विदेशी नागरिक फरार कुन प्रकृया बाट किन दीईयो यत्रो रकम ?
नेपाली सेनाका मेजर अजित प्रताप सिंह लागूऔषधको कारोबारी !